Reiss Nelson Oo Qarka U Saaran Inuu Arsenal Kala Hadlo Mustaqbalkiisa?
HomeWararka Ciyaaraha MaantaReiss Nelson oo qarka u saaran inuu Arsenal kala hadlo Mustaqbalkiisa?
Da ‘yarka Arsenal Reiss Nelson ayaa lagu soo waramayaa inuu qarka u saaran yahay inuu wadahadalo la yeesho Gunners xagaagan si uu kaga hadlo arimaha mustaqbalkiisa.
Wax soo saarka akadeemiyada Arsenal waxaa kasoo baxay Bukayo Saka , Emile Smith Rowe iyo Gabriel Martinelli oo ciyaaraya doorar muhiim ah oo kooxda koobaad ah.
Nelson ayaa loo saadaaliyay inuu amaah ku bixidoono bisha Janaayo laakiin wuxuu doortay inuu sii joogo oo u dagaallamo booskiisa Mikel Arteta .
Si kastaba ha noqotee, 21 jirkaan ayaan ciyaarin kooxda koowaad tan iyo bishii Diseembar, football.london ayaana ku warramaysa in Nelson uu mustaqbalkiisa kala hadli doono Arsenal xagaaga.
Xiddiga reer England ee 21 sano jirada ayaa horay loola xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Norwich City isagoo qeyb ka ah heshiis isdhaafsi ah oo lala galay Emiliano Buendia , Arsenal ayaana loo maleynayaa inay u furan tahay inay iska iibiso si ay lacag ugu hesho suuqa kala iibsiga.
Nelson qandaraaskiisii ​​hore ee Arsenal wuxuu dhacayaa 2023, kaliya 8 kulan ayuu ka soo muuqday kooxda koowaad xilli ciyaareedkaan, isagoo dhaliyay hal gool, mid kalena dhigay Europa League.